संसारकै पुरानो वाइनको कथा – Krishna Thapa
समर सिजन … टुरिष्टहरूको सिजन हो, हिउँदमा त यहाँ लगभग पुरै सुनसान हुन्छ । अहिले सडक पार्क, समुद्रको किनार र शहरका हरेक गल्ली र चोक पर्यटकीय चहलपहलले भरिभराउ छ । बिहानै समाचार पढें – साइप्रसमा अगिल्लो एक महिनामात्र साढे चार लाख पर्यटकहरू भित्रिसकेका रहेछन ।
नीलो सागरको काखमा सगर र सागरको संगम हेरेर किनारै किनार हात समाएर साँझको सिर्सिरे बताससँगै बतासिएर हामी यसरी सँगसँगै हिड्यौं मानौं हामी वर्षौंदेखिका प्रेमी प्रेमिका हौँ ।
सबै मानिसहरूसँग आ आफ्नै जिन्दगीका कथाहरू छन । हजारौं हजार सपनाका लिस्टहरू छन, फेरहिस्तहरू छन, हामीले साइप्रसमा केही इन्डियन, केही नेपाली विद्यार्थी र होटलका कामदारहरू भेट्यौं, केहीसँग पार्कमासँगै फोटो पनि खिच्यौं । त्यसमध्ये एकजना नेपाली भाइ भर्खर एक महिना अगिमात्र कुकिङ भिषामा साइप्रस आएका रहेछन । उनीहरूका आगमनका प्रसंगहरू रोचक थिए, सुन्यौं, जसरी हाम्रा पनि थिए, सुनायौं ।
वाइन टेस्ट गर्दै : साइप्रस म्युजियम
जिन्दगी जिउँदै जाँदा, यात्राहरू हिड्दै जाँदा अवश्य हामीले बिताएका यी पलहरू भोलि स्मृतिका पानामा कोरिएका सुन्दर छापहरू हुनेछन ।
यो अन्जान शहर, अन्जान ठाउँ .. एकै पलका लागि हामीले दुखहरू बिर्सियौं र हरायौँ आफैलाई । यात्राको यो पक्ष अझ मिठो र स्मरणीय यसकारण रह्यो कि इजरायलदेखि मसँगै घुम्न आएकी साथी मेरा हरेक योजनाहरू अत्यन्त उत्साहपूर्वक कुनै अप्ठेरो र अल्छी नमानी, कुनै विशेष र पृथक आग्रहबिना रमाइरहेकी थिइन । यो गर्मीको थकान र पसिनाको वास्तै नगरी हाँसी हाँसी संजोगले सँगसँगै जुरेको यो ट्राभल प्लान फलो गरिरहेकी थिइन् ।
चिनी र वाइनको गुलियो मिठास यतिखेर ओठमा हैन आँखामा छाएको छ र मलाई भन्न मन लागेको छ – ‘यु आर सो स्वीट साइप्रस’ ।
यस्तो यात्रा त कुनै पनि प्रेमी मनको रहर हुन्छ, सपना हुन्छ तर हाम्रो एक मिठो संयोगमात्र थियो । त्यसैले त साँझ बगेर आउने बताससँगै हामीले हाम्रा मनहरू बतासिन दिएनौं । आआफ्ना पृष्ठभूमि र धरातलमा टेकेर हाम्रा पदचापहरू बढाइरहेका थियौं ।
हामी आफ्नो जन्मथलो र कर्मथलो दुवैभन्दा निकै पर घुम्न निस्किएका थियौं र एकएक पलको मूल्य निकै महँगो थियो हाम्रा लागि । यी सबै कथाव्यथाहरू आरामले सुन्ने र पार्कमा दिनभर फोटो खिच्दै बस्ने फुर्सद त कहाँ थियो र हामीलाई ?
छोटो समय भ्रमणमै यति व्यस्त भयौं कि हामीले क्यामेरा समेत बोक्न छोडी दियौं । पहिलोदिन अलिकति बोक्यौं त्यसपछि झन्झटिलो र टाइम कन्ज्युमिंग लाग्यो । अलिअलि फोटो लिने काम मोबाइलले नै गरिहाल्थ्यो । मिलाई मिलाई व्यवसायिक क्यामेराले फोटो लिनेगरी हामीसँग समय पनि थिएन र धैर्यता पनि ।
हात लामै भएपनि सेल्फी स्टिकबाट सेल्फी लिनुको मजा अर्कै हुन्छ । भाइबरमा हाम्रो युरोप टुर भन्ने समुह छ, त्यहाँ स्वीजरल्याण्ड पुगेका साथीहरूका तस्वीर र भिडियो अपडेट भएका छन । हेरेपछि फेरि सम्झिएँ – ला, सेल्फी स्टिक लिन त भुसुक्कै बिर्सिएछ ।
जमाना सेल्फीको छ । बरु, समुद्रलाई पृष्ठभूमिमा पारेर मलाई आकाशमा उडेजसरी कुनै अग्लो ठाउँमा पुगेर सेल्फी लिन मन लागेको छ । सँगैकी साथी भन्दै थिइन् – अनेक गरेर सेल्फी लिंदा धेरै दुर्घटनाहरू भएका छन । यहाँबाट सेल्फी लिंदा कस्तो देखिएला भन्दै सडक वारपार गर्ने अग्लो पुलमाथि उक्लदै गर्दा चितवनमा हात्तीसँग फोटो खिच्न खोज्दा दुर्घटनामा परेका युवकको नमिठो समाचार सम्झिएँ तर भर्खरै साइप्रसको बजारमा १२ युरो खर्चेर किनेको नयाँ सेल्फी स्टिक हातमा परेपछि मैले यो घटना तुरुन्तै बिर्सिएँ पनि ।
संसारकै पुरानो वाइन उत्पादन शुरु भएको क्षेत्र कोलोसीस्थित जीर्ण भवन
पुरानो बन्दरगाह या लिमासोल गढदेखि १५ मिनेटको दुरीमा कोलोसी गढ आइपुग्छ । यो गढले पनि मध्ययुगीन कालखण्डको उल्लेखनीय इतिहास बोकेको छ । मरीनाको पश्चिमतिर अवस्थित यो गढ पर्यटकीय र इतिहासका शोधकर्ता / विद्यार्थीहरूका लागि पनि महत्वपूर्ण स्थलको रुपमा रहेको छ । कोलोसी गढ पनि विभिन्न समयमा धार्मिक विद्यार्थी र पादरीहरू बीच वैमनस्य भई पटक पटक ध्वस्त र पुनर्निर्माण भएको इतिहास रहेछ ।
लिमासोल शहर देखि नौ माइल पश्चिम साइप्रसको यो ऐतिहासिक स्थल आइपुग्दा मनमा यो प्रश्न आइरह्यो कि हाम्रो देशमा पनि यस्ता ऐतिहासिक धरोहर, पर्यटकीय मनोरम स्थल र अग्ला अग्ला हिमाल र सुन्दर पर्यटकीय स्थलहरू कति छन् कति । तर किन हामीले उल्लेख्य पर्यटकहरू भित्र्याउन नसकेका हौंला ?
जब प्रीतिभोजमा उपस्थित पाहुनाहरू मदिरापान्ले मुग्ध भए, राजा रिचार्ड प्रथमले साइप्रसको कोलोसीबाट आयातित वाइनतर्फ इशारा गर्दै भने – ‘ वाइन अफ किंग्स एण्ड किङ्ग अफ वाइन्स’ (वाइनहरूको राजा र राजाहरूको वाइन ) …।
साइप्रसको रातो अंगुरबाट उत्पादन भएको ‘कमाण्डरिया’ ब्राण्डको वाइन संसारकै सबैभन्दा पुरानो वाइन हो । हामी यतिबेला यही वाइनको उत्पादन शुरु भएको ऐतिहासिक स्थानमा आइपुगेका थियौं, बाह्रौं शताब्दीमा ‘कमाण्डरिया’ नामले उत्पादित यो पुरानो वाइन आज पनि निरन्तर सोही नामबाट उत्पादन र बिक्री हुदै आइरहेको छ । वाइन मात्र हैन चिनी तथा अरु खाद्यान्नका मिलहरूका लागि पनि कोलोसी प्रख्यात रहेछ ।
प्रत्येक दरबार र पौराणिक महलहरू राजभवनहरूमा कथा र किम्वदन्तीहरू जोडिएका हुन्छन । ती वास्तवमै सुन्दर र रोचक हुन्छन, रमणिय हुन्छन । कोलोसीको प्रांगणमा आइपुग्दा गर्मीले सेक्न थालेको छ, तर हामीलाई अँझ असिनपसिन हुदै घुम्न रहर पुगेकै छैन । प्रत्येक भत्किएका खण्डहरहरूसँग जोडिएका रोचक इतिहासहरू खोतल्न पुगेकै छैन ।
कोलोसी गढ पनि साइप्रस र विश्व साहित्यका अनेकौं ग्रन्थहरूमा उल्लेखित भएको रहेछ । ‘ला मिलिसिया दि डायस’, ‘स्नो वेस्टेड’. वा बेलायति उपन्यासहरू रेस अफ स्कर्पियन्स, दि हाउस अफ निकोलो, इन सर्च अफ एक्सपेरियन्स, अथवा स्टेवार्ट वीन्सको ‘लायनहार्ट’ जस्ता पुस्तक ग्रन्थहरूमा कोलोसीको सेरोफेरो कोरिएको छ ।
तेह्रौं शताव्दीतिर यहाँ प्रशस्त मात्रामा चिनी उत्पादन र निर्यात गरिन्थ्यो । लिमासोलबाट सिधै ग्रीस र जेरुसेलम तथा युरोपसम्म व्यापार फैलिएको थियो । कोलोसी वरपरका क्षेत्र र एपिस्कोपीमा विशाल उखुखेती र चिनीमिलहरू स्थापित भए । सेन्ट जोनको पालामा उत्पादन थालिएको रातो अंगुरको कमाण्डरियाले संसारकै प्राचीन ब्रान्डेड वाइनको रुपमा गिनिज बुकमा नाम लेखाएको छ ।
कुरियन नदीबाट आउने पानीमा बाँध बनाई ठाउँ ठाउँमा ठुला ठुला पानीघट्ट र मेलहरू बनाइए जहाँ उखु पेलेर खुदो बनाइन्थ्यो र खुदोबाट प्रशोधन गरी चिनी उत्पादन गरिन्थ्यो ।साथै विभिन्न किसिमका मदिरा र फलफूलका जुसहरूको उत्पादन र निर्यातमा पनि यो क्षेत्रले विशेष ख्याति कमाएको थियो ।
आज चिनी मिल या पानी घट्ट त कतै थिएनन केवल तिनका अवशेष मात्र बाँकी थिए । तर सदियौं पुराना ती अवशेषहरू भोलिका पुस्ताले हेर्न पाउन भनेर साइप्रसवासीहरूले संग्रहालयको रुपमा अत्यन्त जतन गरेर राखेका थिए । चिनी र वाइनको गुलियो मिठास यतिखेर ओठमा हैन आँखामा छाएको छ र मलाई भन्न मन लागेको छ – ‘यु आर सो स्वीट साइप्रस’ ।